လူအမြားစုလိမျခံနရေသော လိမျနညျးမြား - Tameelay
သမီးလေးတို့ရေ . . . အပွငျမှာ ကိုယျနဲ့နှဈရှညျလမြား ပေါငျးသငျးဆကျဆံလာတဲ့သူတှေ ၊ လကျတှဲလုပျကိုငျလာတဲ့သူတှတေောငျ အကုနျလုံးကိုအကွှငျးမဲ့ယုံကွညျလိုကျတဲ့အခါ နောကျကြောကို ဓားနဲ့ထိုးတာမြိုး ခံရသေးတာ လိုငျးပျေါမှာ လူခငျြးလညျးမသိ ဘယျမှာနလေညျးသခြောမသိ သူပွောသမြှသာ ယုံနရေတဲ့လူတဈယောကျကို ဘယျလိုစိတျမြိုးနဲ့ ခကျြခငျြးအကွှငျးမဲ့ယုံကွညျရမလဲ ။
ဒီနခေ့တျေမှာ လူလိမျတှဟောလိုငျးပျေါမှာ ပုံစံအမြိုးမြိုးနဲ့လိမျနကွေတာ . . သမီးလေးတို့အသိပါပဲ ။ သိပမေယျ့ သိသိကွီးနဲ့လိမျခံရတဲ့သူတှလေညျးမြားပွီ ။ ဒါကွောငျ့ ဒီစာလေးကိုရေးလိုကျတာသမီး ။
လူလိမျတှဟော ဒီလိုလူတှကေို ပဈမှတျထားကွတယျ ။ လူလိမျအမြားကွီးထဲမှာမှ ခှဲလိုကျရငျ ဒီ ၂ မြိုးတှရေ့တယျ ။
ပထမ လူလိမျက အကောငျ့အပျလာမယျ …ရငျးနှီးအောငျပွောဆိုဆကျဆံမယျ . နညျးနညျးခငျသှားတဲ့အခါ သူဟာ သူ့ဘဝနာစရာတှေ ဝမျးနညျးစရာတှကေို သငျ့ကိုရငျဖှငျ့မယျ ။ သငျသူ့ကိုလုံးဝသနားသှားအောငျ သူကပွောမှာ ။ အကယျ၍ သငျ့မှာတာ သနားတတျတဲ့စိတျ စာနာတတျတဲ့စိတျရှိရငျ သငျဟာ သူပွောသမြှယုံပွီး သူလိမျတာ သငျခံပါတော့မယျ ။ ဒါကွောငျ့ ဒီလူလိမျဟာ သနားတတျတဲ့သူ စာနာတတျတဲ့သူတှကေို ပဈမှတျထားပွီး လိမျတယျ ။
နောကျတဈမြိုးကတော့ ဒီလိုလူမြိုးပါ ။ သူ့အကောငျ့မှာတငျလိုကျရငျ သနျးကွှယျသူဌေးရှုံးတယျ ။ ဘယျတော့မှ အဆငျမပွတောမတငျဘူး ။ လူတကာအထငျကွီးမယျ့လာမြိုးပဲ တငျတယျ ။ ပွီးရငျ သူ့လောကျအလုပျမြားတာလဲ သူပဲရှိသလိုပေါ့ ။ ဒီလိုလူမြိုးကို သငျက အထငျကွီးပွီး အပျလိုကျမိပွီဆိုရငျ ။ နောကျပိုငျးစကားတှပွေော မိတျဆှဖွေဈသှားပွီဆိုရငျ . . . သူဟာ သငျ့ကိုပွောလိမျ့မယျ ။ သူလကျရှိ ဘာတှလေုပျနတော သူ့လုပျငနျးက ဘယျလိုအကြိုးအမွတျရတာ . . .ဘယျလိုနရောတှမှော ရငျးနှီးမွုပျနှံထားတာ ။ ခုတောငျ အခှငျ့အလမျးတဈခုရှိတယျ ။ ငှကေ ဟိုဘကျလုပျငနျးထဲထညျ့ထားတော့ မပျေါသေးတော့ လကျလှတျရမလိုဖွဈနတော . . . အကယျ၍ သငျဟာ လောဘရှိသူတဈယောကျဆို ဘာလုပျငနျးလဲ ဘယျလောကျရငျးရမှာလဲ မေးမိပွီး သူလိမျတဲ့အကှကျထဲ သငျရောကျသှားပါပွီ ။ ဒီလိုလူတှဟော လောဘကွီးသူ ငှရှေိသူတှကေို ဦးစားပေးလိမျကွပါတယျ . . .
ဒါတှဟော လိုငျးပျေါမှာမှမဟုတျပါဘူး အပွငျမှာလညျး ဒီလိုလိမျတတျကွပါတယျ . . .သမီးလေးတှေ အထူးသတိပွုနိုငျကွပါစေ
ဘယျသူ့ကိုမှ လှယျလှယျနဲ့မယုံလိုကျပါနဲ့ လို့
သမီးလေးတို့ရေ . . . အပြင်မှာ ကိုယ်နဲ့နှစ်ရှည်လများ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံလာတဲ့သူတွေ ၊ လက်တွဲလုပ်ကိုင်လာတဲ့သူတွေတောင် အကုန်လုံးကိုအကြွင်းမဲ့ယုံကြည်လိုက်တဲ့အခါ နောက်ကျောကို ဓားနဲ့ထိုးတာမျိုး ခံရသေးတာ လိုင်းပေါ်မှာ လူချင်းလည်းမသိ ဘယ်မှာနေလည်းသေချာမသိ သူပြောသမျှသာ ယုံနေရတဲ့လူတစ်ယောက်ကို ဘယ်လိုစိတ်မျိုးနဲ့ ချက်ချင်းအကြွင်းမဲ့ယုံကြည်ရမလဲ ။ ဒီနေ့ခေတ်မှာ လူလိမ်တွေဟာလိုင်းပေါ်မှာ ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့လိမ်နေကြတာ . . သမီးလေးတို့အသိပါပဲ ။ သိပေမယ့် သိသိကြီးနဲ့လိမ်ခံရတဲ့သူတွေလည်းများပြီ ။ ဒါကြောင့် ဒီစာလေးကိုရေးလိုက်တာသမီး ။
လူလိမ်တွေဟာ ဒီလိုလူတွေကို ပစ်မှတ်ထားကြတယ် ။ လူလိမ်အများကြီးထဲမှာမှ ခွဲလိုက်ရင် ဒီ ၂ မျိုးတွေ့ရတယ် ။
ပထမ လူလိမ်က အကောင့်အပ်လာမယ် …ရင်းနှီးအောင်ပြောဆိုဆက်ဆံမယ် . နည်းနည်းခင်သွားတဲ့အခါ သူဟာ သူ့ဘ၀နာစရာတွေ ၀မ်းနည်းစရာတွေကို သင့်ကိုရင်ဖွင့်မယ် ။ သင်သူ့ကိုလုံးဝသနားသွားအောင် သူကပြောမှာ ။ အကယ်၍ သင့်မှာတာ သနားတတ်တဲ့စိတ် စာနာတတ်တဲ့စိတ်ရှိရင် သင်ဟာ သူပြောသမျှယုံပြီး သူလိမ်တာ သင်ခံပါတော့မယ် ။ ဒါကြောင့် ဒီလူလိမ်ဟာ သနားတတ်တဲ့သူ စာနာတတ်တဲ့သူတွေကို ပစ်မှတ်ထားပြီး လ်ိမ်တယ် ။
နောက်တစ်မျိုးကတော့ ဒီလိုလူမျိုးပါ ။ သူ့အကောင့်မှာတင်လိုက်ရင် သန်းကြွယ်သူဌေးရှုံးတယ် ။ ဘယ်တော့မှ အဆင်မပြေတာမတင်ဘူး ။ လူတကာအထင်ကြီးမယ့်လာမျိုးပဲ တင်တယ် ။ ပြီးရင် သူ့လောက်အလုပ်များတာလဲ သူပဲရှိသလိုပေါ့ ။ ဒီလိုလူမျိုးကို သင်က အထင်ကြီးပြီး အပ်လိုက်မိပြီဆိုရင် ။ နောက်ပိုင်းစကားတွေပြော မိတ်ဆွေဖြစ်သွားပြီဆိုရင် . . . သူဟာ သင့်ကိုပြောလိမ့်မယ် ။ သူလက်ရှိ ဘာတွေလုပ်နေတာ သူ့လုပ်ငန်းက ဘယ်လိုအကျိုးအမြတ်ရတာ . . .ဘယ်လိုနေရာတွေမှာ ရင်းနှီးမြုပ်နှံထားတာ ။ ခုတောင် အခွင့်အလမ်းတစ်ခုရှိတယ် ။ ငွေက ဟိုဘက်လုပ်ငန်းထဲထည့်ထားတော့ မပေါ်သေးတော့ လက်လွတ်ရမလိုဖြစ်နေတာ . . . အကယ်၍ သင်ဟာ လောဘရှိသူတစ်ယောက်ဆို ဘာလုပ်ငန်းလဲ ဘယ်လောက်ရင်းရမှာလဲ မေးမိပြီး သူလိမ်တဲ့အကွက်ထဲ သင်ရောက်သွားပါပြီ ။ ဒီလိုလူတွေဟာ လောဘကြီးသူ ငွေရှိသူတွေကို ဦးစားပေးလိမ်ကြပါတယ် . . .
ဒါတွေဟာ လိုင်းပေါ်မှာမှမဟုတ်ပါဘူး အပြင်မှာလည်း ဒီလိုလိမ်တတ်ကြပါတယ် . . .သမီးလေးတွေ အထူးသတိပြုနိုင်ကြပါစေ
ဘယ်သူ့ကိုမှ လွယ်လွယ်နဲ့မယုံလိုက်ပါနဲ့ လို့